Esi enweta SMS na iPad dị ka a ga - asị na ọ bụ ekwentị mkpanaaka | Nzukọ Ekwentị
Esi enweta SMS na iPad dị ka a ga - asị na ọ bụ ekwentị
Cristian Garcia | | Mac, Sistemụ arụmọrụ
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ iPhone ma nwee iPad ma ọ bụ kọmputa nwere macOS, ị nwere ike ịmasị ịmata etu esi enweta sms na ipad.
Ka ọ dị ugbu a ị nwere ike ịmaraworị Ityga n'ihu (Na-aga n'ihu). Ga n'ihu bụ atụmatụ nke Apple gosipụtara na iOS 8 na OS X Yosemite. Ọrụ a dakọtara na iPhone 5 ma ọ bụ karịa na iPad ọ bụla na-amalite site na ọgbọ nke anọ, yana Mac laptọọpụ ma ọ bụ desktọọpụ Mac site na 4 ma ọ bụ mgbe e mesịrị (Ewezuga otu, Mac Pro, nke naanị dakọtara na nke 2012 mbipute) . Ọrụ a nke Apple webatara afọ ole na ole gara aga bụ ezigbo ọrụ, yana ihe ndị ọzọ, ị nwere ike nata oku na SMS (ozi ndị ahụ abanyela n'akụkọ ihe mere eme mana egwuregwu ole ha nyere anyị na ekwentị anyị mbụ) na iPads ma ọ bụ Macs anyị.
Yabụ, ọ bụrụ na ịghara ime ka ị mata, Site na iOS 8 na ekele maka ngwa iMessage, ị nwere ike izipu ma nata SMS site na iPad ọ bụla, iPod Touch ma ọ bụ Mac ị nwere n'aka ma jikọọ. Naanị ihe ị ga-enwerịrị bụ iphone yana atụmatụ data nọ n'ọrụ iji zipu ma nata. Ọ dịghị ihe ọzọ. Anyị na-agwa gị otu esi eme ya na isiokwu niile na usoro ole na ole. Na njedebe, Anyị ga-enye gị ụfọdụ ndụmọdụ maka ngwa iMessage, ọ bụrụ na ijibeghị ya.
1 Esi enweta SMS na iPad: ntọala
2 Pinye mkparịta ụka na Ozi
3 Etu esi ewepu mkparịta ụka na Ozi
4 Kekọrịta aha gị na foto gị na Ozi
5 Esi gbanwee site na mkparịta ụka ozi na FaceTime
Esi enweta SMS na iPad: ntọala
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmata otu esi enweta sms na iPad, ka anyị mee ya n’ihi n ’ụzọ ole na ole ị ga - enwe ike ịnata ha, echegbula onwe gị, ọ dị mfe. Iji hazie ya, ihe mbụ ị ga-echeta bụ na ngwaọrụ gị niile kwesịrị inwe ya wee banye na iCloud ma, karịa ihe niile, na ha nwere ya wee banye na otu Apple ID, na mgbakwunye na ịbụ ha niile jikọtara na otu netwọk ahụ site na Wi-Fi ma ọ bụ Ethernet.
Ihe ọzọ ị ga - eme iji nwee ike ịhazi oku bụ iji ekwentị mkpanaaka gị iPhone gaa Ntọala> Ekwentị> Kpọọ na ngwaọrụ ndị ọzọ ma gbanye Kpọọ oku na ngwaọrụ ndị ọzọ. Mgbe ịmechara nke a, ị ga-ewere iPad wee mee ihe ndị a: Ntọala> Oge ma rụọ ọrụ Oku site na iPhone.
Inwe ike ịnwe SMS na MMS nọ n'ọrụNa iPhone ị ga-aga Ntọala> Ozi> Zipụ ma nata. Site n'ebe ahụ ị ga-ejide n'aka na Apple ID bụ otu ihe ahụ dị ka nke ị na-eji na ngwa arụnyere iMessage na ngwaọrụ Apple gị niile. Mgbe nke a gasịrị, ị ga - ahọrọ nọmba ekwentị gị ma ọ bụ adreesị email gị ka ị nwee ike ịnata iMessages na ngwaọrụ Apple niile. Ikwesiri ima nke ahu Will ga-emeghachi otu nzọụkwụ a na iPad gị.
N'ikpeazụ ị ga-eburu iPhone ọzọ (ee, anyị kwesịrị ịgwa gị ka ị na-enwe ya mgbe niile kemfe n'agbanyeghị na isiokwu a dabere na ịnweta SMS na iPad), ị ga-alaghachi na menu nke Ntọala> Ozi> Ebugharị ozi ederede, iji họrọ ngwaọrụ nke ịchọrọ ikwe ka izipu yana kwa nwere ike ịnata ozi ederede site na iPhone gị.
Dịka anyị kwere gị nkwa nke a bụ ihe niile ịchọrọ ịhazi iji nweta SMS, MMS ma na-akpọku na ngwaọrụ Apple gị, dịka iPad. Site ugbu a gaba atụla ụjọ, n'ihi na mgbe ha kpọrọ gị na ekwentị iPhone gị, ị nwere ike ịza oku site na iPad gị n'enweghị nsogbu na karịa ihe niile, na-enweghị hassle nke inwe iPhone nke gị n'akpa uwe ma ọ bụrụ na ị na-fiddling na iPad n'oge. I nwekwara ike ịkpọ site na otu iPâd ahụ, ị ​​nwere ike ịme ya site na otu kọntaktị ahụ ma ọ bụ ị nwekwara ike ịme ya site na Oge Oge site na itinye nọmba ekwentị na mpaghara ọchụchọ ahụ niile anyị hụworo. Enwere ike ịsị na ị maraworị otu esi enweta sms na iPad.
Ma ọ bụrụ na nke ahụ ezughị, Anyị ga-egosi gị ntọala ole na ole maka ngwa Ozi (iMessages) na anyị niile nwere na ngwaọrụ Apple anyị. Dịka ọmụmaatụ, ịtọlite ​​mkparịta ụka, wezuga otu mkparịta ụka ahụ ma ọ bụrụ na ọ bụghịzi ihe na-atọ ụtọ ịnwe ya n'elu, ịkekọrịta aha na foto gị na ngwa ahụ ma ọ bụ n'ikpeazụ gbanwee site na mkparịta ụka na ngwa Ozi maka oku vidiyo Oge. Yabụ, nọrọ n’isiokwu a maka nkeji 5 ọzọ n’ihi na enweghị ihe mkpofu ma ị ga-amụta ụma nwere ike ịba uru na mkparịta ụka ọ bụla ị mepere.
Pinye mkparịta ụka na Ozi
Ọ bụrụgodị na ị maghị ya - na Ozi ngwa ị nwere ike ịtọ mkparịta ụka niile, ịhapụ ha n’elu ndepụta ozi gị na mkparịta ụka gị nke mere na ndị ị kacha agwa okwu na-anọkarị ebe ahụ ma ị gaghị eleghara ha anya, ka ị nọrọ ha mgbe niile ma nwee ike ide ha.
Inwe ike ime mkparita uka ahụ na ngwa Ozi ị ga-eme nhazi usoro an:
Swipe right on your mkparịta ụka, mgbe ahụ pịa ntụtụ na ị ga-ahụ na-esote.
Ga-pịa wee jide mkparịta ụka ahụ wee i nwere ike ịdọrọ ya n'elu ndepụta nke mkparịta ụka nke ngwa ahụ.
Etu esi ewepu mkparịta ụka na Ozi
Ọ bụrụ na ịchọrọ, ịnwere ike iwepụ mkparịta ụka nke ị setịpụrụ na nzọụkwụ gara aga, ebe ọ nwere ike ịbụ na ugbu a, ịnweghị mmasị ịnwe mkparịta ụka ndị ahụ na elu nke ngwa Ozi niile.
Iji nwee ike iwepụ mkparịta ụka nke ịtọbara, naanị ihe ị ga - eme bụ ime ihe ndị a:
Pịa ma jide mkparịta ụka ahụ na mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga-ịdọrọ ozi kwupụta na njedebe nke ndepụta.
Pịa ma jide mkparịta ụka ahụ na mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga-pịa ntụtụ na-egosi na-esote ya.
Kekọrịta aha gị na foto gị na Ozi
Na ngwa Ozi, ị nwere ike ịkekọrịta aha gị na foto gị mgbe ị na-ebute ma ọ bụ zaghachi ozi ọ bụla, nke ọhụrụ ma ọ bụ nke ochie. E wezụga nke ahụ, ị ​​ga-ama na foto gị nwere ike ịbụ Memoji ma ọ bụ ihe oyiyi omenala. Mgbe izizi mepee Ozi ngwa ngwa na iPad, Soro ntuziaka ndị iPad ga-egosi gị iji họrọ aha gị na foto gị.
Iji nwee ike gbanwee aha gị ma ọ bụ foto gị ma ọ bụ nhọrọ ịkekọrịta ihe niile dị n'elu nke ị kwadoro, ị ga-emepe Ozi, pịa akara ntụpọ atọ ị ga-ahụ n'akụkụ, na mgbe nke ahụ gasịrị pịa bọtịnụ "Dezie aha na foto" wee mepụta nke ọ bụla n'ime nhọrọ ndị a anyị debere n'okpuru:
Igbanwe foto profaịlụ gị: ị ga-pịa Dezie na mgbe ahụ ị ga-ahọrọ otu n'ime nhọrọ.
Changegbanwe aha gị: ị ga-eme pịa ederede ederede ebe ị ga-ahụ ka aha gị pụtara.
Iji nwee ike ịgbalite ma ọ bụ kwụsị ọrụ ndị ahụ iji kesaa ọdịnaya: ị ga-pịa button enịm n'akụkụ “Share aha na foto”(Green na-egosi na arụ ọrụ ya).
Changegbanwe onye nwere ike ịhụ profaịlụ gị: ị ga-pịa otu nhọrọ bụ dị n'okpuru "Ekekọrịta na-akpaghị aka" ("Ekekọrịta aha na foto" ga - arụ ọrụ).
Ikwesiri ima na aha na foto inwere na Ozi ha nwekwara ike-eji gị Apple ID na maka "My kaadị" na Ndi ana-akpo.
Esi gbanwee site na mkparịta ụka ozi na FaceTime
Ọ bụrụ na ị nwere mkparịta ụka Ozi mepere, ị nwere ike ibido onye gị na gị na-akparịta ụka ma ọ bụ kpọọ gị okwu ọdịyo. ee, ọbụlagodi na ọ dị na ngwa Ozi. Iji mee nke a, ị ga - agbaso usoro ndị a:
Na mkparịta ụka ị ga-emeghe na Ozi, pịa foto profaịlụ ma ọ bụ aha na elu otu mkparịta ụka ahụ.
Pịa ozugbo FaceTime ma ọ bụ ọdịyo.
Anyị na-atụ anya na isiokwu a enyerela gị aka ịghọta ma mụta otu esi enweta SMS na iPad site na iPhone, yana otu esi enweta oku na iPad gị, MMS, zipu foto, akwụkwọ mmado na ihe niile ị nwere ike ime site na ozi ngwa sitere na Apple gị ngwaọrụ. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, ịnwere ike ịhapụ ya na igbe igbe dị n'okpuru.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Sistemụ arụmọrụ » Mac » Esi enweta SMS na iPad dị ka a ga - asị na ọ bụ ekwentị
Otu esi edozi nsogbu ngwa
Uzo ndi ozo di nma nke Amazon iji zuta ihe obula